Sheekh Shaakir “Nama quseyso doorashadii Cadaado, Xaaf waxaa ku ogaa Ganacsade”
Ururka Ahlusuna Waljamaaca oo lagu qancinayo inay isaga baxaan Magaalada Dhuusa-mareeb
Sagal Radio Services • News Report • June 12, 2015
Xoogag ka tirsan Ahlusunna Waljameeca ayaa Axaddii ina dhaaftay si lama filaan ah ula wareegay gacan ku heynta magaalada Dhuusa-mareeb ee xarunta u ah maamulka lagu waddo in loo sameeyo gobollada dhexe gaar ahaan Galguduud iyo Mudug, kaddib markii ay halkaa isaga baxeen ciidammadii dowladda.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo maanta mar kale tagaya magaalada Dhuusa Mareeb
Sagal Radio Services • News Report • April 1, 2015
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta lagu wadaa inuu u ambabaxo magaalada Dhuusa Mareeb ee xarunta Galgaduud, iyadoo booqashadan ay tahay tii saddexaad uu ku tagayo magaalada muddo labo bilood ah.
Geedo Qoroow”Cafis ayaan u fidineynaa Dagaalamayaasha Ahlusunna
Gudoomiyaha Degmada Dhuusomareeb ee maamulka Dowladda C/Raxmaan Cali Maxamed Geda Qoroow ayaa shaaciyay inay Cafis u fidinayaan Dhalinyardii u dagalaameysay Ahlu-Sunna Waljamaaca ee ka qeyb qaatay dagaalkii dhawaan Magaalaada dhusumaareeb. Gudoomiayaha ayaa intaaa ku daray in Mamaulkiisa iyo Ciidamada Dowladda ayna wax dacwo u qabsan doonin dagaalyahanada Ahlu-Sunna hadii ...
Xabad joojin la dhex dhigay dhinacyadii ku dagaalamay Guriceel iyo Dhuusa Mareeb
Sagal Radio Services • News Report • December 15, 2014
Waan waan ayaa laga dhex bilaabay dhinacyadii labadii maalmood ee la soo dhaafay ku dagaalamay degmooyinka Guriceel iyo Dhuusa Mareeb, iyadoo lagu guuleystay in la kala dhex dhigo xabad joojin saddex maalmood ah.
Maamulka Degmada Dhuusomareeb oo ka warbixiyay Cida ka Canta ku haysa Magaalada
Xaalada Magaalada Dhuusomareeb oo ay Saaka ku dagaalameen Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo Garab kamid ah Ahlusunna oo loogu Magac daray Al-Sufa sida la sheegayo ayaa la soo sheegayaan in ay dagan tahay.
Ciidamada Dowladda iyo Ahlusunna oo ku dagaalamaya Degmada Dhuusomareeb
Ciidammo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo xoogagga Ahlusunna Waljamaaca ayaa saakay ku dagaalamay gudaha degmada Dhuuso-mareeb ee xarunta gobolka Galguduud.